Hery Rajaonarimampianina : Mitombo isa ny mpanohana azy -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Mitombo isa ny mpanohana azy
Nampiavaka ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ny famelana malalaka ny mpiasam-panjakana handeha amin’ny nahim-pony. Tsy mba nanao toa ny fitondrana nifandimby, nampiditra ny politika tany anaty fitantanan-draharam-panjakana, izay namboly an’izany hoe Tim Fanabeazana, Tim Fahasalamana, Tim ….Ny an’ity filoha ity dia mandeha amin’ny fandresen-dahatr’ireo mpikambana ny fandraisana ny mpikambana ao amin’ny antoko naoriny.
Tsy mahagaga raha mitombo isa hatrany ireo mpanohana azy. Vao omaly, no nangataka ny firotsahan’ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina ny antoko Madagasikara Afaka tarihin’ny Maitre Avoko Rakotoarijaona. Talohan’izao dia efa maro ireo depiote Tim resy lahatra ka nanohana azy tahaka ny depiote Tim etsy Avaradrano sy ny any amin’ny faritra hafa. Ny olom-boafidy tao anatin’ny Mapar moa dia efa tany am-boalohany no efa nahatsapa sy resy lahatra tamin’ny fanohanana azy. Tsy tambo isaina ny fikambanana sy antoko politika madinika na vaventy efa nanambara ny fanohanana azy.
Miavaka amin’ny fanaovana politika tokoa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Na izy aza no namorona ny Hvm ( Hery Vaovaon’i Madagasikara) dia tsy mba nanao toa ireo filoha teo aloha tompona antoko politika nisora-tena ho filohan’izany antoko noforoniny izany izy. Manana ny filoha nasionaliny ny Hvm, dia ny minisitra Rivo Rakotovao.
Vao izay fomba fanaovana politika izay fotsiny, dia efa maharesy lahatra olona maro. Tsy mitovy amin’ny antoko Tim sy ny sasany, tsy manome vahana an’ireo mpiray antoko aminy fa tia tena. Tsy mahatoky olona hafa harotsaka ho kandida raha tsy ny tenany ( Ravalomanana Marc) na ny vadiny ( Lalao Ravalomanana).
Ny tsikaritra amin’ity antokon’ny filoha teo aloha Ravalomanana ity dia noho izy mihendan-ja am-pandehanana. Saika heno foana ny fialan’ireo mpikambana maventy tao anatiny. Ny hany herin-dRavalomanana Marc sisa dia io manao fitaovana ny fiangonana io. Eo koa ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana sy ny fangalarana “départ” amin’ny fanaovana dokambarotra ny tenany manokana.